ကိုဗစ်ကာလ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် မိဘတွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ကိုဗစ်ကာလ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် မိဘတွေ ဘာလုပ်သင့်သလဲ
ကိုဗစ်ကာလတွင် ဖြတ်သန်းရသည့် ဘဝအခြေအနေမှာ ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ကလေးများအတွက်သာမက လူကြီးမိဘများအတွက်လည်း ခက်ခဲလျက်ရှိသည်။
ကျောင်းသို့ ပြန်တက်နိုင်ခြင်းမှာ အရေးပါသော မျှော်လင့်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့် အချိန်တွင် ကျောင်း ပြန်ဖွင့်ပြီး မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ပညာဆက်လက်သင်ကြားရမည်မှာ ကျောင်းသားများအတွက် မေးခွန်းထုတ်ဖွယ် ရှိနေသည်။
အောက်ပါ အချက်များသည် ကလေးငယ်များ ကျောင်း ပြန်တက်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်မည့် အချက်များဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်လို အချိန်မှာ ကျောင်းတွေ ဘယ်လိုပုံစံဖြင့် ဖွင့်ကြမလဲ?
နိုင်ငံတကာရှိ ကျောင်းများတွင် ကလေးငယ်များ ကျောင်းသို့ပြန်လာနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများ ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ၁ ဘီလီယံကျော်မျှသော ကလေးများမှ ကျောင်းများ ပိတ်ထားရခြင်းကြောင့် ကျောင်းသင်ခန်းစာနှင့် ဝေးကွာလျက်ရှိနေသေးသည်။
သို့သော် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃၄ နိုင်ငံမှ ကျောင်းပေါင်း ၁၀၅ ကျောင်း(၇၈ ရာခိုင်နှုန်း) သည် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန် ရက်များကို သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဩဂုတ်လနောက်ဆုံးရရှိသော ဒေတာများအရ ကျန်ရှိနေသေးသည့် ကျောင်း၅၉ ကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ် ထားပြီး သို့မဟုတ် ဖွင့် ရန် စီစဉ်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာနှင့် တစ်ဝှမ်း အခြေအနေများမှာ ကွာခြားမှုရှိသောကြောင့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်မည့်အစီအစဉ်များမှာလည်း အဆင့်ဆင့် ကွာခြားမှုရှိသည်။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုများသောအားဖြင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရများမှ ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ဆွေးနွေးကာ စီစဉ်မှုများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
ထိုသို့ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အာဏာပိုင်များမှာ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ၊ လူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေများ စသည့်အချက်များကို အခြေခံ၍ ပညာရေးတွင် အကျိုးအမြတ်နှင့် အန္တရာယ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ကလေးသူငယ်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် အဓိကထားရမည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးသော ဖြစ်နိုင်သည့် အသိသက်သေများဖြင့်သာ ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့် ရန် ဆုံးဖြတ်သင့်သည်။
ကလေးများ ကျောင်းပြန်သွားလျှင် လုံခြုံစိတ်ချရနိုင်သလား?
ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်ရန် အစီအမံများတွင် ရပ်ရွာအတွင်းရှိ ပြည်သူများ၏ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးများပေါ် ဦးတည်၍ စီမံဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် နိုင်ငံအချိုတွင် ‌ကျောင်းများကို သီးသန့် အနေဖြင့် ပြန်လည် မဖွင့်ဘဲ စက်ရုံများ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ နှင့် ဆက်စပ်၍ ပြန်လည်ဖွင့်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြသည်။
ကျောင်းတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများ နှင့် အခြားဝန်ထမ်းများ ကျောင်းသို့ပြန်လာသောအခါ လုံခြုံမှုရှိစေရန်နှင့် မိဘပြည်သူများကလည်း ၎င်းတို့ သားသမီးများ ကျောင်းသို့ ပြန်ပို့ရန် ယုံကြည်မှုရှိလာစေရန် ကြိုတင်စီစဉ်လျာထားမှုများကို ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့ကလေးများ ကျောင်းသို ပြန်ပို့ခြင်းမှာ ယခင်နှစ်များ နှင့် မတူညီတော့ပေ။
ကျောင်းများမှာ အချိန်ကာလ တစ်ခုအတွက် ပြန်ဖွင့်နိုင်သော်လည်း ပြည်တွင်း ကူးစက်မှုများပေါ်မူတည်၍ အချိန်မရွေး ပြန်ပိတ်ရမည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။
လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကြောင့် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ကလေးတိုင်း လုံခြုံမှု ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပေသည်။
COVID- 19 ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကျောင်းများတွင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရေးများ ပြုလုပ်ထားသင့်လဲ?
ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန်မှာ ကျောင်သားများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ဆရာများနှင့် ၎င်းတို့ မိသားစုများ၏ ကျန်းမာရေးလုံခြုံမှု ရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ထားသော COVID-19 ကျန်းမာရေး တုံ့ပြန်မှုများ နှင့် ကိုက်ညီသင့်ပေသည်။
အချို့ကျောင်းများတွင် လူစုလူဝေးဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များမှာ-
-စာသင်ခန်းများကို ယာယီ နေရာများ သို့မဟုတ် အပြင်ဘက် တွင် ပြောင်းရွေ့သင်ကြားရခြင်း၊
-စာသင်ခန်းထဲရှိ သင်ကြားသူဦးရေကို လျော့ချရန် စာသင်ချိန်များကို အရွေ့အပြောင်း ပြုလုပ်ရခြင်း အစရှိသည့် အခက်အခဲများရှိနိုင်ပါသည်။
ရေနှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်ရမည်မှာလည်း ဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖြင့် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်ရမည့် အချက်တွင် ပါဝင်သည်။
တာဝန်ရှိသူများကလည်း သန့်ရှင်းစွာ ပြုမူ နေထိုင်ရမည့် အချက်များဖြစ်သည့်
-အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့် နည်းများ ( နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလျှင် တံတောင်ဖြင့် အုပ်ထားခြင်း)၊
-ကျောင်းအတွက် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်
-သန့်ရှင်းသော အစားအသောက်ပြင်ဆင်ခြင်း စသည့်အချက်များကို သေချာစွာ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိ ကိုစစ်ဆေးထားသင့်ပေသည်။
ထို့အပြင် အုပ်ချုပ်ရေး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆရာမများကိုလည်း အထက်ပါအချက်များကို ကောင်းမွန်စွာ စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးနိုင်ရန် သေချာစွာ လေ့ကျင့်ထားပေးသင့်သည်။
မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဆရာ သို့မဟုတ် ‌ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအား မည်သည့် မေးခွန်းများမေးရမည်နည်း?
ယခုလို စိုးရိမ်စရာများ ရှိနေချိန်တွင် မိဘများအနေဖြင့် မေးခွန်းများ များပြားနေမည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ပေ။
အောက်ပါမေးခွန်းများမှာ မိဘများ မေးလိုသည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
-ကျောင်းသားများ လုံခြုံမှုရှိစေရန် ကျောင်းဖက်မှ မည်သည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ထားသနည်?
-ရောဂါမှ ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်လည်ကျန်းမာလာသူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို မည်သို့ အထောက်အပံ့ပေးထားသနည်း?
-အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကို လွဲပေးရန် လိုအပ်သော ကျောင်းသားများအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်နည်း?
-ကျောင်းများ ပြန်ဖွင့်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကျောင်း၏ အကာအကွယ်ပေးမှုနှင့် အနိုင်ကျင့်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ပြောင်းလဲခြင်း ရှိလာမည်လား?
-ကျောင်းတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ကျောင်းသား မိဘ တစ်ဦး အနေဖြင့် မိဘဆရာကော်မတီအပါအဝင် သို့မဟုတ် အခြားသော ကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့် မည်သို့ ပါဝင်ကူညီနိုင်သနည်း?
အကယ်၍ ကလေးမှာ ပညာရေးတွင် နောက်ကျ ကျန်ခဲ့လျှင် မည်သို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်သလဲ?
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျောင်းသားများသည် သူတို့ဆက်လက် သင်ကြားလိုသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် ခက်ခဲသော အခြေအနေများတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာများနှင့် မိဘမျာ ပံ့ပိုးမှုအောက်တွင် သူတို့ ၏ သင်ခန်းစာများကို ဆက်လက်သင်ကြားခဲ့ကြသည်။
သို့သော် များစွာသော ကလေး (မြို့ပြမှ မဟုတ်သည့်) များသည် ကျောင်းများပြန်ဖွင့်သော အခါ သင်ကြားမှုများကို အမီလိုက်နိုင်ရန် အကူအညီများစွာ လိုသေးသည်။
ကျောင်းတော်တော်များများသည်လည်း ကျောင်းသားများ စာသင်ခန်းသို့ အမြန်ပြန်ရောက်လာစေရန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။
ထိုအစီအစဉ်များထဲတွင် မွမ်းမံသင်တန်းများ သို့မဟုတ် ပြန်လည်ကုစားရေးအတန်းများ၊ သို့မဟုတ် ကျောင်းပြင်ပ သင်ခန်းစာများကို အိမ်တွင်သာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုမှာ ကျောင်းများကို အချိန်ပြည့်ဖွင့်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ ရောနှောသင်ကြားမှုဟု ခေါ်သည့် စာသင်ခန်းတွင်း ညွှန်ကြားချက် နှင့် အဝေးမှ ညွှန်ကြားချက်များကို တစ်လှည့်စီ သင်ကြားပေးနေကြသည်။
အဝေးမှ ညွှန်ကြားခြင်းဆိုသည်မှာ အိမ်တွင် မိမိဘာသာလေ့လာနိုင်ရန် ရေဒီယို၊တီဗီ သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် သင်ကြားခြင်းများ ပါဝင်သည်။
ကျောင်းတွင် သွားရောက် သင်ကြားသကဲ့သို့ အိမ်တွင် စာသင်ချိန်များပုံမှန်ဖြစ်စေရန် ပို၍ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ထိုမှသာ ကလေးများ စိတ်အနှာင့်အယှက်ကင်းပြီး အာရုံစူးစိုက်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
ကလေးမှာ အထူးကိစ္စရပ်များ ဥပမာအားဖြင့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးသေဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပွားနေပါက မိဘများအနေဖြင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကလေး၏ ဆရာ သို့မဟုတ် ကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်သည်။
အကယ်၍ မိမိကလေးမှာ ကျောင်းပြန်တက်ရန် ငြင်းဆန်နေပါက မည်သို့ လုပ်ရမည်နည်း?
မိဘများအနေဖြင့် မိမိကလေးသည် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသော အကျပ်အတည်း၏ ဖိစီးမှုကို မည်သို့ကိုင်တွယ် ရမည်ကိုနားလည်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
စာသင်ကြားရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပြီး သူတို့လက်ရှိ ခံစားချက်များကို မေးခွန်းများ မေး၍ အပြုသဘောဆောင်သည့် ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း က ဆိုးရွားသည့် ခံစားချက်မဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့သို့ ခံစားလာရပါက မိဘများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြနိုင်ကြောင်း၊ ကလေးများအတွက် မိဘများမှာ အမြဲအဆင်သင့် ဖြစ်နေကြောင်း သူတို့သိအောင် ပြောဆိုပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ကလေးငယ်များကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို လိုက်နာရန်နှင့် မိသားစုနှင့် အတူ စာဖတ်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးရမည်ဖြစ်သည်။
မိဘများအနေဖြင့် အခြားရွေးချယ်စရာ တစ်ခု အနေဖြင့် အခြားမိဘများ သို့မဟုတ် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်းကာ အကြံဥာဏ်များ မျှဝေကာ အတွေ့အကြံများ ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။
Latest Post News Read 965 times